Muxuu yahay xalka loo helay libaaxyada lo’da weerara? | Radio Himilo
Home / Madadaalo / Muxuu yahay xalka loo helay libaaxyada lo’da weerara?
Muxuu yahay xalka loo helay libaaxyada lo’da weerara?
Himilo – Libaaxu wuxuu ka mid yahay duur-joogta ka qeyb qaadata isku dheelli-tirnaanta degaanka, haddana wuxuu weeraraa oo uu laayaa xoolaha la dhaqdo sida ariga, lo’da, iyo geela.
Dadka reer guuraa ah ee xoolo-layda ah waxay dhibaato ku qabaan dugaagga sida libaaxyada iyo miciyoodka kale ee hilib cunka ah, kuwaas oo ka dila xoolaha.
Xoolo dhaqatada si ay xoolahooda ugu nabad galaan waxay qaataan go’aan ah inay laayaan bahalada duunyada dila, tani waxay dhibaato dabar goyn ah ku noqotay dugaagii.
Cilmi baarayaal jooga Botswana iyagoo xal doon waxay soo bandhigeen hindise lagu kala badbaadinayo libaaxyada, iyo lo’da. waxay keeneen fekrad ah in qaar dambe ee lo’da lagu sawiro indho loo ekeysiinayo weji ku soo fiirinaya.
Natiijada ka soo badaxay waxay noqotay inay hoos u dhacaan weeraradii libaaxyada ay ku qaadi jireen lo’da dalkaas oo markii hore ka harsan la’aa libaaxyada wax u gaarsada.
Waxaa la isku daray lo’da miskaha dambe korkooda looga sawiray indho waa wayn iyo kuwo kale oo aan sawir loo yeelin, waxaa la arkay inay libaaxyada hororka ah ay beegsanayaan lo’da aan lahayn sawirka.
Ma jiraan naasleey indho ku leh qaarka qambe saynta korkeeda, balse tallaabadan waxay noqoday mid xiiso galisay dadka u dooda degaanka in laga helo noole kasta. waxay dareensan yihiin inay tani meesha ka saareyso toogashadii iyo sumaynta libaaxyada.
Libaaxyada gaaray da’da ay ku dhali karaan ee jooga Africa waxaa lagu qiyaasay 23,000 iyo 36,000 , halka tiradoodu ay ka badneyd 100,000 sannadihii 1990s.
Previous: Dhaqdhaqaaqyada Salaadda waxey yareeyaan xanuunada Laf-dhabarta
Next: Kiisaska Covid-19 ee India oo kor u dhaafay 8.8 Milyan